maxaa ka cusub kooxdaada 24ka saac ee ugu dambeesa – V O S
Qodobka 1-aad: Kooxda Roma ayaa dadaal ugu jirto inay Suso iyo Juan Cuadrado kasoo kala qaadato kooxaha AC Milan iyo Juventus.
Qodobka 2-aad: Chelsea ayaa rajeeneyso sida ugu dhaqsiyaha badan inay kasoo gaba gabeyso saxiixyada labada cayaaryahan ee Seie A-da Talyaaniga ka cayaaraan Matias Vecino & Mattia Caldara.
Qodobka 3-aad: Olivier Giroud ayaa kusoo jeedo horyaalka France asigoo dalab ka helay naadiga Marseille xili qorshihii Atletico Madrid ku aadi lahaa fashlimay.
Qodobka 4-aad: Daily Mail ayaa qortay in Real Madrid 100-milyan oo pound kusoo qaadaneyso Willian iyo Thibaut Courtois oo naadiga Chelsea ka wada tirsan.
Qodobka 5-aad: Kooxda Barcelona ayaa dhigeeda Sevilla ka aqbashay 9.50-milyan oo euro ah oo ay ku qaadanayaan Aleix Vidal .
Qodobka 6-aad: Juventus ayaa go’aankeeda badashay waxayna heshiis cusub ka saxiixi doonaan cayaaryahan Miralem Pjanic 48-saac nagu soo fool leh.
Qodobka 7-aad: Tababaraha Bayern Munich Niko Kovac ayaa saxaafada u sheegay in Robert Lewandowski xagaagan kooxda isaga tagi doonin xili Real Madrid iyo Man United lala xariirinaayo.
Qodobka 8-aad: Kooxda Lazio ayaa dhigeeda Arsenal u sheegtay inaysan 8-milyan oo euro ah ka badan ku iibsan doonin cayaaryahan Lucas Perez.
Qodobka 9-aad: Cayaaryahan David Luiz ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa cayaareed wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay ka hoos shaqeynta tababare Sarri sidoo kalena meelna uusan kaga soconin Chelsea xagaagan.
Qodobka 10-aad: Naadiga Sevilla ayaa hoos u dhigtay lacagaha ay ku dooneyso Steven N’Zonzi haatan 30-milyan ayay ku rabaan ayagoo markii hore 40-milyan euro ah ku rabeen waxaana saxiixiisa ugu cad cad Roma ayadoon meesha laga saari karin Arsenal iyo Barcelona inay xidigaan rabaan.
Qodobka 11-aad: PSG ayaa iska diiday iibsashada Anthony Martial oo ay Man United u bandhigtay madaama United cayaaryahankan ku dooneyso 71-milyan oo pound.
Qodobka 12-aad: Man United ayaa rajeeneyso inay labo saxiix muhiim ah sameyso ka hor inta uusan suuqa Premier League xirmin 9-ka bisha August waxaana loo badinaa Willian ama Perisic inay soo qaadan doonto halka daafacyada Harry Maguire ama Yay Mina midkood ay soo qaadan doonto.
Qodobka 13-aad: Arsenal ayaa loo ogolaaday inay la hadli karaan cayaaryahan Ousmane Dembele oo diidan inuu xagaagan Barcelona baaqi kusii ahaado balse Gunners waxay ku dooneysaa inay amaah ku qaadato wiilkan halka Barcelona ku rabto 135-milyan oo pound.
Qodobka 14-aad: AC Milan ayaa ku dhow soo qaadashada daafaca reer Brazil Rodrigo Caio oo 24-jir ah kana tirsan naadiga Sao Paulo.
Qodobka 15-aad: War cusub oo Football London qortay ayaa lagu sheegayin Chelsea 55-milyan oo euro ah iyo Alvaro Morata u bandhigtay Juventus sidii ay kaga soo qaadan laheyd Higguain iyo Ruggani.
Qodobka 16-aad: Kulamada saaxiibtinimo ee kooxaha caanka ah maanta cayaarayaan:
ICC Cup: PSG Vs Atletico Madrid (2:35 duhurnimo xiliga geeska Afrika)
Daacad for Somalia
Previous Fanaanka caanka ah ee Ilkacase oo Hees Raab ka qaaday Gumaadka Oromada ee Somalida